एक Sideboard र बुफे बीचको भिन्नता
२०२०-१२-१। मा व्यवस्थापक द्वारा
साइडबोर्ड साइडबोर्डहरू स्टाइलको एर्रेमा आउँदछ र बिभिन्न सुविधाहरूको साथ। आधुनिक दिनको साइडबोर्ड अक्सर पातलो हुन्छ र परम्परागत साइडबोर्ड भन्दा अलि लामो खुट्टा हुन सक्छ। जब बैठक कोठामा राखिन्छ, साइडबोर्डहरू एक मनोरन्जन केन्द्रको रूपमा कार्य गर्न सक्दछन्। किनभने तिनीहरूका l ...
हामी जहिले पनि प्रश्नहरू लिइरहन्छौं, र हाम्रो सबैभन्दा सामान्य यो हो कि तपाईंलाई कफि टेबल आवश्यक छ कि छैन। कुनै पनि आन्तरिक डिजाइनरलाई सोध्नुहोस् र उनीहरूले तपाईंलाई भन्छन्, हर हालमा प्रकार्य ट्रम्पहरू। किन तपाईं सुन्दर कोठा सिर्जना गर्नुहुन्छ यदि तपाईंले यसलाई कहिले प्रयोग गर्नुहुने छैन? किन यो स्थापना गर्न यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं कसरी एक एस प्रयोग गर्नुहुनेछ ...
आवश्यक फर्नीचर टुक्रा प्रत्येक बेडरूम आवश्यक छ
२०२०-१२-१-18 मा व्यवस्थापक द्वारा
धेरै तरिकामा, एउटा सुत्ने कोठा कुनै पनि घरको सबैभन्दा आवश्यक कोठा हो। यसले तपाइँलाई लामो दिन पछि आराम गर्न र स्फूर्ति दिन मद्दत गर्दछ, र तपाइँको शयन कक्षको डिजाइनले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्दछ जुन निन्द्रालाई प्रोत्साहित गर्दछ। सहि फर्निचरमा लगानीले तपाईंलाई यो हासिल गर्न र क्वालिटीलाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ।
हेबै Yifan लकड़ी उद्योग कं, लिमिटेड
२०२०-१२-०१ मा व्यवस्थापक द्वारा
एजीजी: अरबका ग्राहकहरूले हाम्रा सामानहरू जाँच्दछन् र हाम्रो फ्याक्ट्री भ्रमण गर्छन् अहमदले हामीसँग लामो समयसम्म कुरा गरे, २० औ ए.यू.जीमा उहाँ आएर भेट्न जान चाहानुहुन्छ, कारखानामा हाम्रो नमूनाहरू जाँच गरिसकेपछि उनले हामीलाई भने कि उनले केही डिजाइन परिवर्तन गर्न चाहानुन्। , हामी हाम्रो संग कुरा गर्‍यौं। ईन्जिनियर र बनाउनुहोस् ...
कस्तो प्रकारको काठ कडा काठ हो?
प्रशासक द्वारा २०१-0-०6-०3 मा
कस्तो प्रकारको काठ कडा मिश्रित काठ हो? हार्डवुड एक प्रकारको काठको सामान्य नाम हो जसमा उच्च घनत्व र कठोरता हुन्छ, जस्तै ओक, खरानी, ​​खरानी, ​​बिर्च, एल्म, जुजुब, इत्यादि। घरेलू ओक, खरानी, ​​खरानी, ​​बिर्च, एल्म, जुजुब, सबै हार्डवुडको हुन्।
सिटी पाइन भनेको के हो? डगलस फर काठ को मुख्य प्रयोग के हो?
चिनियाँ नाम: डग्लस फर / पहेंलो देवदार अंग्रेजी नाम: डग्लस फर / डी-एफआईआर परिवार: पिनासी जीनस: ट्याक्सोडियम लुप्तप्राय ग्रेड: राष्ट्रीय स्तर दोस्रो कुञ्जी सुरक्षित जंगली बोटबिरुवा (अगस्त,, १ 1999 1999 1999 मा राज्य परिषदले अनुमोदित) सदाबहार ठूलो रूख, माथि १०० मिटर उचाईमा, १२ मिटरसम्म DBH। बार्क छ ...